Dadkii Diinta Ugu Soo Horeeyay – Wajibad
Dadkii Diinta Ugu Soo Horeeyay
Ugu Soo Horeeyay
Rasuulka (csw) markii Allaah (Subxaanahu wa taacaalaa) soo saaray mas’uuliyaddaa weynanka badan oo ah mid qof bini aadan ah la saaro tii ugu cusleyd una baahan juhdi, dadaal iyo sabir, waxa uu bilaabay u qumitaankeedii isagoo ka bilaabaya meeshii laga soo direy ee Makka oo ahayd xaruntii diinta ee carbeed, kacbadiina ay ku taalley dadkii ku noolaana ahaayeen dad aad uga fog xaqa iyo islaamka.
Wuxuu markaa Rasuulku (csw) markii ugu horreysey dacwadii ku bilaabay si qarsoodi ah maxaa yeelay waxa dhici kari lahayd haddii uu markii u horreysey kala dhex kici lahaa inay dhib u keeni lahayd dacwada, sidaa dareeed Allaha Xakiimka ah ayaa ku ilhaamiyey Rasuulkiisa inuu bilowgii dacwada qarsoodi u guto, waxayna dacwadu sidaa ku soo socotey saddex sano.
Ugu horreyntii wuxuu Rasuulku dacwada ka bilaabay ehelkiis (gurigiisa), qaraabadiis iyo saaxiibbadiis intii ugu kheyrka badneyd ee uu wanaagga ku yaqaanney isna lahaa wey ajiibayaan xaqa.
Waxaa dacwadii ajiibey oo noqday dadkii ugu horreeyey ee islaamka qaatay:
Xaaskiisii Khadiijo bintu Khuweylad,
Saaxiibkiis Abu Bakar as-Sidiiq,
Mowlihiisii Zeyd binu Xaarith iyo
Ina adeerkiis Cali binu Abii-dhaalib oo wiil yar ahaa.
Subyr binu Cawaama
Cabdiraxmaan binu Cawf
Sacad binu abii waqaas
Dalxa binu Cubeydillah
Ka dib waxaa ku soo xigsaday oo soo islaamay:
Bilaal binu Rabaaxa,
Abuu Cubeyda Caamir ibnu Jarraax,
Abuu Salama binu Cabdilasa,
Arqaam ibnu abii Arqam,
Cusmaan binu Madcuum iyo laba walaalihiis ah Quddaama iyo Cabdullaahi,
Cubeyda binu Xaarith binu Mudhalib,
Siciid binu Seyd iyo xaasikiisii Faadumo bintu Khadaab (Cumar binu Khadhaab walaalishiis),
Cabdullaahi binu Mascuud iyo kuwo kale waxaa uuna ibnu Haashim gaarsiiyey illaa 40 qof.
Intaasoo dhan waxay ahaayeen dadkii islaamka ugu horreeyey, dabadeedna qof ayaa loo soo gelayey ilaa uu islaamkii magaaladii Makka ku fidey o lagu sheekeystey.
One thought on “Dadkii Diinta Ugu Soo Horeeyay”